Tag: compendium | Martech Zone
Saturday, April 16, 2011 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Jimcihii, waxaa la i siiyay fursad la yaab leh oo aan kaga qayb galo Shirweynaha Hal-abuurka Compendium. Intii uu hoggaaminayey Madaxweyne Frank Dale, oo fikrad ka helay Blake Matheny, iyo iyadoo la taageerayo aasaasaha Chris Baggott iyo Sales VP Scott Blezcinski, shirkaddu waxay qaadatay "waqti ka baxsan" shaqada iyo, taa badalkeedana waxay u qoondeysay maalin hal-abuurnimo. Chris wuxuu bilaabay hindisaha sheeko yaab leh oo ku saabsan sida uu ugu guuldareystay hal ganacsi, laakiin kadib markuu aqoonsaday
Isniin, February 2, 2009 Talaado, Oktoobar 6, 2020 Douglas Karr
Dhisida barxad loogu talagalay ganacsiyada inay wax ku qoraan waa guul uun haddii macaamiishaas ay si dhab ah uga faa'iideystaan ​​barxadda. Waan ognahay in macaamiisheennu ay ku guuleysan doonaan helitaanka maalgashiga haddii aan ka heli karno iyaga inay abuuraan oo ay wadaagaan qoraallo badan oo ku saabsan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Isticmaalka Platform wuxuu u baahan yahay in softiweerku shirkad adeeg ahaan dhab ahaantii leeyahay istiraatiijiyad lagu hubinayo ka faa'iideysiga. Laga soo bilaabo markabka iyada oo loo marayo isticmaalka kormeerka, barxad waa in la hubiyaa
Isniin, Oktoobar 27, 2008 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Waxaan rabay inaan tan idinla wadaago dadyowga, tani waa hab qabow oo lagu heli karo tilmaamaha loo maro demo ka socda websaydhkaaga - waxayna si fiican ula shaqeyneysaa shirkadayda, Compendium Blogware.
Talaado, Disembar 18, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Patronpath wuu korayaa! Thanks to qaar ka mid ah shaqooyinka cajiibka ah ee shaqaalaheena Taageerada Iibka, Iibinta iyo gaar ahaan agaasimaheena guud - Patronpath ayaa socda. Markaan u maleeyo Software ka Adeeg ahaan, ma jiro tusaale ka weyn dalabyada khadka tooska ah ee internetka loogu sameeyo warshadaha adeegga cuntada. Waxaan ka bilaabay Patronpath bishii Ogos ee sanadkan. Shaqadu waxay ahayd mid dhib badan. Kooxaheena horumarinta waxay ku khasbanaadeen inay ka adkaadaan hawlo aad u adag oo adag laakiin waxay sii wadaan inay keenaan. Sidoo kale,